DOWNLOAD SUBAC QURAANKA KARIIMKA
Horaan uga soo hadalnay asraar badan oo quseeyso raqamkan, waxaanna soo xusnay inuu yahay raqam asaas u ah arqaamta Quraanka kusoo aroortay, sidoo kalena waxaan soo xusnay inuu yahay raqam mucjiseed muujinaya weynida Quraanka iyo xaqnimadiisa. Quraanka kariimka ah waxaa loosoo dejiyey inuu wacdi iyo waciid u noqdo khalqiga oo ay ku waantoobaan, si maalinta Qiyaamaha looga badbaado shiddada iyo dhibta jirta. Kitaabka Quraanka waxaa loo kala saaraa, guud ahaan, labo qeybood oo kala ah Makki  oo ah Quraanka ku soo dagay Nebiga intii uu magaalada Makkah joogay iyo Madani  oo ah Quraanka ku soo dagay Nebi Muxamed wakhtigii uu magaalada Madiina deganaa. Dhaqanka dabiiciga ahaa ee Nebi Ciise. Lagu soo dejiyay Nebi Ciise. Wuxuu ku qoran yahay luuqada reer bani Israa’iil , iyo luuqada ingiriiska. Sida ku cad kitaabka Quraanka kariimka ee aasaaska u ah diinta Islaamka , Ilaahay sareeye wuxuu soo dejiyay afar Kitaab  oo la kala siiyay afar Rasuul.
Kala soocida noocan ah waxaay salka ku heeysaa meesha ay suuraduhu ku soo dageen, oo ka hor intii aanu Nebi Muxamed ka tagin magaalada Makkah quraanka ku soo dagay waxaa loo yaqaanaa Makki halka markuu Nebigu u suhac magaalada Madiina waxyigii iyo quraankii ku soo dagay ay noqonayaan Madani.
Kuwa ugu badan ee xaqa maqlay ama arkay ama kutubbadoodii hore uu ku dhigan yahay ee kalmadahani ay tilmaamayaan, ee Alle uu leeyahay way ku gaaloobeen xaqii, ama waad ku gaaloobeysaan waa Nasaarada. Quraan waa kiitaabka Illahey ee saldhiga u ah diinta Islaamka ee dadka muslimiinta ahi ku xidhan yihiin.
Waxaad kaloo fiirisaa sawirka tilmaamaya toddobadaasi marxalad ee insaanka abuurkiisa uu maro, oo laga soo xigtay kitaabka diktoorka weyn ee la yiraahda Dr Keith Mort oo ah ninka looga dambeeya cilmiga Sayniska.
Subac Quraanka Kariimka –
Haddii aanu helnay suuradaha inta aayadood ee ay ku dhammaadaan ay subc 7 ama ay yahiin suurado uu ku labo jibbaarmo raqamka 7waxaanu helnay inay yahiin 14 suuradood, taasoo iyana ah raqamka 7 oo 2 jibbaaran Subxanallaah!!. Labada suuradood ee ay labadaasi aayadood ku kala jiraan Al Baqrah iyo An Naba waxaa u dhaxayso 77 suuradood, taasoo lamid ah raqamka 7 oo dhowr jibbaaran.
Keli ahaansha Ilaahay    Khalalaadkii ay sameeyeen dadkii hore.
Sidoo kale jumladdaasi ayaa waxay ka kooban tahay 14 xarfood, taasoo lamid ah raqamka 7 oo labo jibbaaran. Si kastaba ha ahaatee, bisha Ramadaan dadka muslimiinta ahi waxay dhamaystiraan akhrinta dhamaan Quraanka ayagoo ku tukanaya salaada tarawiixda.
Intaasi waxaa soo raaca dhowr suxufi oo lagu soo kala dejiyay anbiyo iyo Rusulwaxaana ka mid ah:. Wuxuu ku qoran yahay luuqada reer bani Israa’iiliyo luuqada kkariimka.
Tartiibka RAQAMKA (7) ee Qur’aanka (Mucjisooyinka Qur’aanka Kariimka) | Caasimada Online
Sidaan horey usoo xusnay eubac ugu horreeyo ee Quraanka kariimka tartiibkiisa kusoo arooray waa raqamkan 7, sidoo kalena raqamka ugu dambeeyo ee tartiibka Quraanka kusoo arooray waa isla raqamkan 7.
Dhanka suuradaha Quraanka ah ee ay aayadahoodu ku dhammaadaan 7 aayadood iyo tiro 7 jibbaar ah macnaha raqamka 7 oo dhowr jibbaaran waa suuradahan hoose.
Waxyigii Alle u soo diray dadka, iyo hogaamiyayaashii dadka u horseedayay iftiinka. Labada noocba midkiiba waxaa nalooga xarrimay 7 xaaladood. Ku qurzanka luuqada Yuhuuda. Quraanka wuxuu inoo sheegay nebiguna NNKH uu ina baray in naartaasi lagu muteysta xumaan falidda. Kitaabka Injiil ” Masiixiyad “. Ku xidhnaanta Alle ay ka mid tahay danaynta diinta.
Suuraddii Quraanka oo dhan la bar bar dhigey waxay ka kooban tahay 7 aayadood oo Ilaahay uu sidaasi ugu doortay, waana suuradda keliya ee bisinka aayad ahaan loogu tiriya. Suurad kasta iyo aayad kasta oo ka mid ah kitaabka Quraanka Kariimka ahi wax ayay tilmaamaysaa isla markaana faraysaa ama ka reebaysaa dadka.
Waxaa kaloo nebigu NNKH uu inoo sheegey dembiyada muubikhaatka lagu hallaagsamo inay yahiin 7. Ku dheh “La yimaada toban suwar oo la mid ah waa Quraankee una yeedha cid kasta marka laga reebo Alle, haddii aad run sheegaysaan.
Ilaahay wuxuu nebigiisa ku yiri aayadda 87d ee suuradda Al Xijr. Hanuunka Ilaahay u soo direy dadka. Jiijiidida iyo qurxinta codka marka la akhrinayo Quraanka waxaa loo yaqaanaa towjiid. Muxuu martabaddani ku heley raqamka 7?
Werin kale in kabadan 70 mar. Qisadii Nabi Sakariye iyo wiilkiisa. Wadajirka Quraanka iyo Xadiisku waa sharciga saxda ah ee Alle ugu tallo galay in aadamahu isku maamulaan, waxaana loo yaqaanaa Sharciga Shariicada. Dhererka aayadaha iyo Suuradaha Suraanka way kala duwan yihiin, tan ugu gaabani waa Suuratul- Al-Kawsar oo ka kooban 3 aayadood ; halka suurada ugu dheeri tahay Suuratul- Al-Baqara oo ka kooban aayadood.
La dhaqanka dadka ee Nebi Muxamed. Quraan waa hadalka ilaaheey mana aha mid la sameeyey ama la abuuray waa waxyi ka yimid xagga rabbi.
DOWNLOAD ESPERIENT CREATOR 3.8